Wararka - Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo xirto koofiyad fidsan oo fidsan
Waa macquul in gabdho badani ay jecel yihiin koofiyadaha fidsan, maxaa yeelay iyada oo la xidho, si kasta oo aad caadi u tahayba, waxaa lagugu calaamadin doonaa "fashionista". Haddaba su’aashu waxay tahay, waa maxay waxa ugu fiican ee loo maro si loo xidho qaflad fidsan oo si fiican u muuqda?
Waa maxay koofiyadaha fidsan? Waa maxay qaabka wajiga ee ku habboon waxa la xidho?
Gabdhaha, jecel inay xirtaan dhar caadi ah, waxaad u dooran kartaa koofiyado midabbo diiran leh oo diiran, oo markaad xirato, waxay noqon doonaan kuwo aan caadi ahayn oo macaan u leh qaab suuban.
Gabdhaha dabeecadda badan, waxaad u dooran kartaa xoogaa koofiyado fidsan oo leh qoraalo shaqsiyeed, waxaadna dooran kartaa qaabab naqshad ballaadhan oo ballaadhan, oo markaad xirato, waxaad u janjeeri kartaa jihada 30 darajo, sidaa darteed waxay u eg si dhakhso leh ula soco
Gabdhaha jecel dharka dhexdhexaadka ah waxay dooran karaan koofiyado fidsan oo fidsan oo leh cagaar ciidan iyo geel sida midabka ugu weyn, si ay uga dhigaan labbiskooda dhexdhexaadka ah mid aad u qurux badan. Sawirka habka xirashada koofiyad fidsan
Sifada koofiyadda fidsan ee fidsan ayaa ah inay buuxsantahay. Markii la xidho, waxay wajiga oo dhan ka dhigaysaa mid isku dheelitiran. Haddii aad xirtid koofiyadda gebi ahaanba, qaybta kore ee madaxa ayaa u muuqan doonta mid fidsan, badankood waxyar bay ka sarreeyaan, taas oo ah, cirku wuxuu ku yaal bartamaha foodda ama Meel sare, xir koofiyad fidsan madaxa gadaashiisa madaxa gadaashiisa. Ha u xirin si hufan oo habsami leh.
Intaas waxaa sii dheer, koofiyad fidsan oo bir ah ayaa la gashan karaa iyadoo aan loo eegin xagga hore, dhabarka, dhinac, iyo qallooc. Saamaynta guud iyo waxtarka dhinacyada oo dhan ayaa ka wanaagsan geeska qalooca.
Waa maxay qaabka wejiga uu ku habboon yahay geeska fidsan
Koofiyadda fidsan ee fidsan ma ahan mid aad loo soo xulay, sidaas darteed way fududahay in lagu ciyaaro timo fudud, waana inay wax yar qalloocan tahay. Dharka waxaa loola jeedaa qalabka loo isticmaalo inuu ku habboonaado dharka. Inta badan waxaa ku jira koofiyadaha, kabaha, garbasaarrada, gacmo gashi, iyo waxyaabo kale.